Tsvaga nzira yekusarudza yakanaka sofa yako yekutandarira | Bezzia
Sarudza sofa rako renzvimbo yekutandarira
Susana Garcia | 29/03/2021 20:00 | Decoration, Simba
El sofa chinhu chakakosha kwazvo muhupenyu hwedu, sezvo iri nzvimbo yekunyaradza. Ndiyo nzvimbo yatinotandara kana tasvika kumba uye ndosaka ichi ichifanira kuve chikamu chepakati chekushongedza kwedu. Kusarudza sofa yenzvimbo yekutandarira ibasa rakaoma nekuti isu tinofanirwa kusarudza musambo, jira kana ruvara, pamwe nehukuru nekunyaradza.
Tichaona mazano akasiyana kana uchishongedza imba yekutandarira nesofa rakakura. Iyi fenicha ndiyo yakanyanya kukosha mumba yekutandarira, nzvimbo yayo yepakati uye chinotanga kukwezva, saka tinofanira kuisarudza zvakanaka. Kune akawanda marudzi emasofa uye ndosaka tine zvakawanda zvekusarudza kubva.
1 Sofa reganda
4 Ruvara pasofa
5 Modular masofa
6 Neutral toni mune yekutandarira
ari matehwe ematehwe zvidimbu zvinogara kwenguva refu kana tichivachengeta sezvavanokodzera. Iwo ari nyore kuchenesa uye ekupedzisira kwemakore nemakore. Mune ino kesi, kutenga iyi mhando yemasofa imari huru. Ivo anodhura asi anogara kwenguva yakareba kupfuura machira acho. Ndokusaka mune ino kesi zvirinani kusarudza chidimbu chine yakasarudzika uye yakapusa dhizaini isingabude munzira. Muchiitiko ichi tinoona imwe ine toni dzebhuruu asi kunewo ganda mune yakasviba kana yakasviba toni. Zvinoratidzika kwatiri sechinhu chakashongedzwa uye chemhando yepamusoro.
Iyo vintage maitiro inogona kuve yakanaka sarudzo kune yedu yekutandarira imba. Kana iwe wawedzera imwe antique fenicha unogona kusanganisira vintage sofa. Izvi zvinowanzoitwa zveganda rekare uye dehwe uye zvinogara zvakanyanya. Vane hunhu hwakawanda kunyangwe iwe uchifanira kuwedzera mamwe makushingi kuti ugadzire musiyano uye unobata zvakapfava. Kana macushion aine kubata kwazvino, isu tichakwanisa kugadzira imwe musiyano kuvandudza maitiro esofa.
Imwe yei Masofa akasununguka kwazvo aunogona kutenga ndeaya ane chaise longue. Rudzi rwemasofa rwakakwana kana tiine nzvimbo mumba yekutandarira, nekuti inotibvumira kuti tirare pasi zvakakwana. Imwe yesarudzo dzakanakisa kana iwe uchida kushandisa yakawanda nguva pasofa ndeyeye chaise longue. Tenga iyo sofa mumumvuri usina kwazvakarerekera uye uchafarira chidimbu ichi kwemakore anouya. Mune ino kesi ivo vakasarudza chena toni, kunyangwe akawanda akachinjika mavara senge grey anowanzo sarudzwa.
Una imwe pfungwa ine hushingi ndeyokusarudza pasofa mune toni dzinonakidza kana runako izvo zvinokwezva kutarisa. Pasina kupokana iyi sarudzo ine njodzi nekuti isu tinofanirwa kusanganisa iwo ruvara rwe sofa pamwe nekushongedza kwakasara. Iwe unogona kusanganisa iwo macushion kuti aite iwo musiyano uye sanganisa akasiyana mavara munzira inonakidza uye yekutanga nzira. Iyi, semuenzaniso, ine yero yakasimba iyo inokwezva kutariswa uye inoita kuti sofa ive chikamu chakakosha kwazvo muimba yekutandarira.
Kana uchida imwe pfungwa yakanyanyisa kuita nekuti iwe unoda kugadzirisa iyo nzvimbo kune yako kufarira, uye isu tinokukurudzira iwe makuru modular masofa. Aya marudzi emasofa anoumbwa nezvidimbu mumatanho akareruka, aine mitsara yakakosha chete. Iwo anowanzo kutengeswa mumatanho ekutanga zvakare kuti asanganise nyore. Vamwe vane musana uye vamwe havana, kuitira kuti vaparadzanise chaise marefu kana masofa anogona kugadzirwa. Iyo inonakidza uye yakakosha zano kune chero yekutandarira imba.
Neutral toni mune yekutandarira
Imwe yemafungiro akanakisa e chero mhando yeimba yekutandarira iri kusarudza sofa mune ekutanga toni. Pfungwa iyi inogara ichishanda, sezvo chiri chidimbu chinoenda nezvose. Ruvara grey rwakakurumbira kwazvo izvozvi uye zviri nyore kusanganisa, pamwe nekuve iwo ruvara mune iro kushandiswa kusingaonekwe zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Sarudza sofa rako renzvimbo yekutandarira
Misoro mishanu murume nemukadzi havafanirwe kumbokurukura
Zvipfeko zvekupfeka zvechirimo zvinogona kukukurudzira